Markii ay Somaliland xangaruuftaanba xumo ayaa ku dhaca!!!
Friday 22nd November 2019 13:16:31 in Aragtida Dadweynaha by Tafatiraha Guud
Cunnuggan ayaa looggu tashannaayey Xamar intii uu debedda wareegaayey.
Madaxweyne Farmaajo ayaa kulama qarsoodiya oo la xidhiidha dejinta kacdoonka Hawiye la yeeshay Taliyaha Sirdoonka Qaranka Soomaaliyeed fahad Yaasiin.
Kulanka Madaxweyne Farmaajo iyo Taliyaha Sirdoonka ayaa laggu macneeyey Kacdoonka Hawiye iyo baraarugga weyn ee sidda weyn isusoo taraayey, ee ka dhashay sidda loola dhaqmay Madaxda Hawiye, oo lagga baajiyey inay taggaan Kismaayo iyo Beledweyn.
Madaxweynaha Soomaaliya Mohamed Abdullah Farmaajo iyo Taliyaha Sirdoonka Qaranka ayaa laggu macneeyey kulankoodda inay Beesha Hawiye ku qanciyaan inuu masuul ka yahay dhamaan xumahaa Raysal-wasaaraha Soomaaliya Hassan Ali Khayre.
Raysal-wasaare Hassan Ali Khayre ayaa markii uu amuurtaa markii uu ka warhellay isku siidaayey Waddanka Qadar oo gacanta ku haysa Fahad Yaasiin Taliyaha Sirdoonka Soomaaliya si uu dabinka loo qoollay isagga furfuro.
Booqashadda Hassan Ali Khayre ee Dowladda Qadr ayaa ah mid uu dowladdaa ugu dacwooddey in Fahad Yaasiin lagga furfuro ama laga furdaamiyo.
Cabashaddii Siyaasiyinta Hawiye ayaa dusha lagga saaray ama loo xambaariyy Hassan Ali Khayre, isla markaasiinna Madaxweyne Farmaajo gebi-ahaan iska leexiyey.
Amarka illaahay markii Somaliland ay qandhuuftaanba iyaga ayaa is qandhuufta.
Kacdoon weyn iyo oog culus ayaa maamulka Farmaajo Xamar iyo Guud ahaan dalka kagga baxaysa.
Madaxda Hawiye oo ku Balkan-qaadday in Xumaha Farmaajo iyo Khayre Xamar la dhex joogga si dhakhsaa loo nadiifiyo.
Khayre ayaa Qadar ugu dacwooddey in Fahad Yaasiin lagga farsameeyo si uu u sii noollaaddo siyaasiyan.
Iyo Siyaasiyiinta Hawiye ayaa ku Balkan-qaadday in Xamar qodaxda iyo qanniinka lagga nadiifiyo.
Madaxweyne Farmaajo ayaa Hawiye isku deyaaya inuu ku qanciyo inuu shaqo ku lahayn ceebayntii iyo cadaadiskii loola badheedhay Madaxda Hawiye, ee lagaga joojiyey Booqashadda Kismaayo iyo Beledweyn dhowaa.
Waxaanna kuli dusha lagga saaray masuuliyadeedda Raysal-wasaare Hassan Ali Khayre taasi oo noqon karta khilaaf hor leh oo ku yimid Xukumadda labadda cunnug ee Soomaaliya burburinnaaya, waa Farmaajo iyo Khayree.
Somaliland markii ay xangaruuftaanba Qaranka ayaa Fumo runtii.
[DEG DEG:-] Taliyayaal Ciidan Oo Xabsiga Garoowe Lagu Guray Iyo Arrimo Culus Oo Lagu Qabtay